Kugamuchirwa kweApple Watch Series 3 inokura neiko kweye Series 0 ichiderera | Ndinobva mac
Iyo Series 3 ndiyo yazvino uye inomhanyisa modhi yeApple Watch parizvino inowanikwa pamusika uye zvinoita sekunge chave kusundidzira iyo Applewatchwatch yaida kuva mucherechedzo muindastiri, zvirinani ndizvo zvinoita sevaongorori vazhinji.
Vaongorori vanoisa mishumo yavo pane akawanda masosi uye kutsvagurudzwa kwemusika, uko kazhinji kazhinji vanoita kunge vari kure kwazvo nezvazviri. Kuedza kubvisa kusahadzika, iye anovandudza David Smith, akagadzira girafu pamusoro pemidziyo inoshandisa yake Pedometer ++ application.
Mune ino girafu, tinogona kuona kuti kubvira payakasvika pamusika, iyo Apple Watch Series 3 yave, mwedzi nemwedzi, yakanyanya kushandiswa Apple Watch modhi, kupfuura vese vayakatangira. Zvinoenderana negirafu iri, 33% yeApple Watch iyo inoshandisa chishandiso ichi inoenderana neChikamu 3, nepo Apple Watch ichimiririra 30%, apo kusati kwatanga kweiyo Series 3 iyo yaive neinoda kusvika 45%.
Iyi graph inoratidza kuti vazhinji veVashandisi 0, Wakavandudza mudziyo wako weChikamu 3, sezvo iyi yazvino modhi ichipa yakakwana mitsva maficha uye mashandiro, pamwe nekuvandudza kwakanyanya maererano nespeed, zvichienzaniswa neyekutanga chizvarwa modhi, modhi iyo neese nyowani yekuvandudza inova inononoka zvishoma.
Smith anoti zvinopfuura izvo Apple haipe rutsigiro rwewatchOS 5 paChikamu 0, vane huwandu hwevashandisi vanosvika 25%. Iyo Apple Watch Series 0 yakasvika pamusika munaKurume 2015 uye neyakagadziridzwa imwe neimwe nyowani, mutsauko mukuita kwemamodheru nyowani neyepakutanga wawedzera zvishoma nezvishoma, sezvanga zvichitarisirwa, ichichinja iyo yekutanga modhi kuita chishandiso chatinogona kugamuchira zviziviso uye dzimwe nguva kuvapindura, zvimwewo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kugamuchirwa kweApple Watch Series 3 inokura apo iyo yeChikamu 0 inoderera